Madaxweyne Cagjar oo sheegay in dad careysan ay xireen khadka tareenka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Cagjar oo sheegay in dad careysan ay xireen khadka tareenka
Madaxweyne Cagjar oo sheegay in dad careysan ay xireen khadka tareenka
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa maanta sheegay in dhallinyaro careysan ay xanibeen waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira Magaalada Addis Ababa iyo dekedda dalka Jabuuti.
Wadada laamiga iyo khadka tareenka ee labada dal isku xira ayaa lafdhabar u ah badeecadaha ugu badan ee gala dalka Itoobiya, oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof, isla-markaana aan lahayn wax deked ah.
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa Wakaaladda Wararka Reuters u sheegay in dhallinyaro deegaanka ah, oo ka mudaaharaadeysay weerarka Sabtidii ka dhacay Degmada Garbo-ciise ee Gobolka Siti, laguna dilay dad badan oo Soomaali ah ay xireen wadadaasi.
“Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan maanta u furi lahayn khadka tareenka ee wadada Jabuuti.” Ayuu Madaxweynuhu ugu sheegay Reuters, farriin qoraal ah oo uu u diray.
Barraha bulshada ayaa lagu arkay muuqaalo muujinaya dadweyne careysan oo xiraya wadada laamiga iyo khadka tareenka.
Maamulka DDSI ayaa Talaadadii maleeshiyada Canfarta ku eedeeyay inay weerareen, isla-markaana ay bililiqeysteen Degmada Garbo-ciise.
Xaaladda Garbo-ciise ayaa maanta deganeyd, ka dib dagaal qaraar oo shalay ku dhex maray Ciidamada Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo maleeshiyada Canfarta.
Gudoomiyaha Gobolka Siti, Idiris Jibriil ayaa dagaalkii shalay ku sheegay mid dib loogu caabinayay maleeshiyadii Canfarta ee Sabtidii weerarka ku qabsatay Garbo-ciise.
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo ku laabtay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Next articleMasuul lagu qarxiyay hoygiisa oo ku yaala Degmada Ceelwaaq